Himoota giduu garee For...Next yeroo ifteefameef irra deddeebi'i.
Lakkaa'aa: Marsaa lakkaa'aan gatii jalqabarratti gara harka mirgaa mallattoo walqixaa kaa'a. Lakkofsa jijjiramtootaa qofatu sirriidha. Marsaa lakkaa'aan ni dabala ykn ni hir'ata akkaataa jijjiiramaa Step hanga End'n darbutti.
Jalqaba: Lakkoofsi jijjiiramaan gatii jalqabaa ka'uumsa marsaa irratt kan ibsuu dha.
End:Lakkoofsi jijjiiramaan gatii xumuraa marsaa dhumaa irratti kan ibsuu dha.
Step:Gatii akkataa dabaluu ykn hir'isuu lakkaa'aa marsaa qindeessi. Yoo Step'n hin ibsamne,lakkaa'aan marsa 1'n dabala.kan keessatti, End'n irra guddaa Start ta'uu qaba. Yoo lakkaa'aa hir'isuu barbaadde,End'n irra xiqqaa Start ta'uu,fi Step,n gatii nagatiivii qabaachuu qaba.
Akkuma lakka'aa jijjiiramaan hir'ateen,LibreOffice Basic gatiin dhumaa qaqabuu isaa mirkaneessa.Akkuma lakkaa'aan gatii dhumaa dabarseen,marsaan ofumaan dhuma.
yommuu lakkaa'aa jijjiiramaan gad laakkaa'u,LibreOffice Basic ol yaa'insa ykn gad yaa'insa mirkaneessa.yommuu lakkaa'aan End(gatii Step poozatiivii)caale ykn End(gatii Step nagatiivii)xiqqaate marsaan ni xumurama.
hub:Qooda marsaaFor...Next ,yoo osoo hin beekin marsaa Exit Forwajjin keessaa baate,marsaa tokkoo qofaatu baha.
Fakkeenyi armaan gadii diraa waraantoo miseensota 10 qabu tartiiban kaa'uuf marsaa walkeessa galan lama fayyadama.sun jalqaba baafata baay'een guutama.